ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အား မထမအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးစဉ် ( ဓာတ်ပုံ - AFP)
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ အပတ်စဉ်စစ်မေးတဲ့ ရုံးချိန်းအ မှုတွေမှာ တရားလိုပြသက်သေတွေကိုအပြန်အလှန်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့သလို အမှုကို အကောင်းဆုံး ခုခံချေပ နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှုတွေကို သေချာရှင်းရှင်း လင်းလင်း နဲ့ တိတိကျကျဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှေ့နေတွေကို ပြောဆိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ အမှုစစ်ဆေးမှုအခြေအနေတွေ ရန်ကုန်က သတင်းပေးပို့ထားတာကို အလိမ္မာပြောပြပေးပါမယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဝင်းမြင့်တို့ကို နေပြည်တော်မှာ ဇွန်လ ၂၁ ရက် တနင်္လာ နေ့ ရုံးထုတ်မှာတော့သူတို့ အမှု ၄ မှု အတွက် တရားလိုပြသက်သေတွေကို စစ်ဆေး ခဲ့ တယ်လို့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းမှာ တရားလို စစ်ပြီးသွားတာကြောင့် ဒီကနေ့မှာ တရားလိုပြ သက်သေတွေကို တစ်မှု နှစ်ယောက် စစ်တာဖြစ်ကာ အဓိက စစ်မေးတာတွေ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေတွေနဲ့ အပြန်အလှန် စစ်ဆေးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်း ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
"ဒီနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၇ရယ်၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေရယ် ၂ခုစလုံးကို စစ်တယ်။ တရားလိုဘက်က သက်သေက ဗိုလ်ကြီးအာကာမင်း လာတယ်။ အဲတယောက်ထဲကို ၂မှုစလုံးစစ်တာပေါ့။ သူကသက်သေ ၂ခုစလုံးပါနေတာကို။ နောက်အမှုက သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကောပေါ့ ။သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ၂၅ အဲဒါကိုရဲတယောက်နဲ့ မြို့မဈေးက အုပ်ချုပ်ရေးမှုး။ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကိုစစ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဒီနေ့တနေကုန်တာ ပေါ့."
ဒီကနေ့စစ်ဆေးတဲ့ အမှုတွေကတော့ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ တို့နဲ့ စွဲဆိုထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ၃ မှု နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ကိုတော့ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ စွဲထားတဲ့ တစ်မှု စုစုပေါင်း အမှု ၄ မှု အတွက် ကြားနာ စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၄ရက် တနင်္လာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းတုန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေထဲက သုံးမှုကို ပထမဆုံး စတင်ကြားနာခဲ့ရာမှာ တရားလိုတွေကိုသာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး တရားလိုပြ သက်သေတွေကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့အမှု ၃ မှုက တရားလိုတွေဖြစ်တဲ့ ရဲမှူးကြည်လင်း နဲ့ ရဲမှူးမြင့်နိုင် တို့ကို အရင်ရုံးချိန်းမှာ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အမှုမှာလည်း အဲနေ့က ရဲမှူးမြင့်နိုင် ကိုဘဲစစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့စစ်ဆေးမှုတွေမှာ တဖက်က တင်ပြချက်တွေကို အကောင်းဆုံးခုခံချေပနိုင်ခဲ့သလို အပြန်အလှန် မေးခွန်းတွေမေးတာမှာလဲ အပြစ်ကင်းကြောင်းကို သက်သေထူနိုင်လောက်တဲ့ အထိ တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ် လို့ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ အမှုကို စစ်မေးခဲ့တဲ့ ဦးကြည်ဝင်း ကပြောပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကတော့ဒီနေ့ကိုယ်စစ်ရတာကို ကိုယ်စစ်တဲ့ အခါကျတော့ ဥပဒေ အရ ငြိစွန်းမှုမရှိဘူးပေ့ါ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေက ပြည်ထဲရေးဌာနသုံး တာတွေဘဲလေ။ သူ့ဆီကမိတာမဟူတ်ဘူးလေ။ တိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပေါ်ရှင်းနေတာဘဲလေ။ အဲဒါ တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကသိမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ မနက် ၃နာရီလောက်ရောက်ပြီးတော့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆီက ၆လုံး နောက်ကင်းဂိတ်ကတလုံး ကိုယ်ရေးအရာရှိဆောင်က တလုံး ဒါဘဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကသိမ်းတာမပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအမှုတင်မဟုတ်ဘူး။ ရှေ့နေပညာ အရ သိနေတာဘဲ။ ပြစ်မှုကင်းမကင်းသိတယ်လေ။ နောက်ရဲကိုယ်တိုင်ကကိုယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ ကသိမ်းမသိမ်းကိုပေါ်တာဘဲ။ ထုံးစံအရဆို မူးယစ်ဆေးတွေမိရင် ရှာဖွေပုံစံနဲ့သိမ်းကြတယ်လေ။ဒါကကျနော့် အိမ်ထဲက၊ ကုတင်ဆီကစသဖြင့်သိမ်းကြရတယ်။ ခုက သူတို့ရဲတွေကသူတို့ဘာသာအပ်တာလေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပ်တာမှမဟုတ်တာ။"
အမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အတိုင်ပငိခံရဲ့ အမှုတွေအပေါ်သဘောထားနဲ့ပတ်သတ်လို့ဗွီအိုအေက အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေတွေကိုမေးကြည့်တာမှာတော့ သူ့သဘောထားနဲ့ပတ်သတ်လို့ ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
"သူကတော့သူ့သဘောထားကတော့ ဒီအမှုတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွား အောင် အမှုကိုပေါ်လွင်အောင်စစ်ပေးပါတဲ့ ပေါ်လွင်အောင်စစ်ပေးပါတဲ့။"
ဒီကနေ့ ရုံးချိန်းမှာ အတိုင်ပင်ခံက သူမမွေးနေ့ကို တကူးတက ကျင်းပပေးကြတဲ့ ပြည်သူတွေကိုကျေး ဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ သူမအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကျန်းမာဖို့နဲ့ ညီညွှတ်စွာနေထိုင်ကြဖို့ မှာကြားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မွေးနေ့ ဆုတောင်းအနေနဲ့ ပြည်သူတွေ ကျန်းမာဖို့ကို ပြန်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ ရှေ့နေအဖွဲ့ကနေတဆင့် မှာကြားလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၅၊ အစိုးရလျှို့ဝှက် ချက်ပေါက် ကြားမှုဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒပုဒ်မ ၈ ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ ၊ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံဆော်မှု လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပြင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါင်း ၇ မှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ တရားစွဲခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက် ကြားမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃(၁) (ဂ)ကို နေပြည်တော်မှာ ရုံးပြောင်း စစ်ဆေးခွင့်ရမရ ကြားနာမှုကိုလည်း နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်း ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
မနက်ဖန် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ရုံးချိန်းမှာတော့ ဒေါက်တာမျိုးအောင် အပါအ၀င် ၃ယောက်ကို တရားလို ဦးစိုးထွန်းရွှေက စွဲထားတဲ့ အများပြည်သူတည် ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှု ပျက်အောင် လုပ်ဆောင်မှု၊ အမှုကို စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်သလို၊တရားလို ဦးထွန်းမြင့်အောင် ခေါ် ဦးညီညီက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲထားတဲ့ အမှုကိုလည်း စစ်ဆေးသွားဖို့ ရှိ ပါတယ်။
နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ရဲ့ အပတျစဉျစဈမေးတဲ့ ရုံးခြိနျးအ မှုတှမှော တရားလိုပွသကျသတှေကေိုအပွနျအလှနျစဈဆေးနိုငျခဲ့သလို အမှုကို အကောငျးဆုံး ခုခံခပြေ နိုငျခဲ့တယျလို့ ရှနေ့တှေကေပွောပါတယျ။ အတိုငျပငျခံကိုယျတိုငျကလညျးအမှုတှကေို သခြောရှငျးရှငျး လငျးလငျး နဲ့ တိတိကကြဖြွဈအောငျ လုပျဆောငျပေးဖို့ရှနေ့တှေကေို ပွောဆိုတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဒီကနေ့ အမှုစဈဆေးမှုအခွအေနတှေေ ရနျကုနျက သတငျးပေးပို့ထားတာကို အလိမ်မာပွောပွပေးပါမယျ။
နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ကို နပွေညျတျောမှာ ဇှနျလ ၂၁ ရကျ တနင်ျလာ နေ့ ရုံးထုတျမှာတော့သူတို့ အမှု ၄ မှု အတှကျ တရားလိုပွသကျသတှေကေို စဈဆေး ခဲ့ တယျလို့ ရှနေ့တှေကေပွောပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရုံးခြိနျးမှာ တရားလို စဈပွီးသှားတာကွောငျ့ ဒီကနမှေ့ာ တရားလိုပွ သကျသတှေကေို တဈမှု နှဈယောကျ စဈတာဖွဈကာ အဓိက စဈမေးတာတှေ လုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ရှနေ့တှေနေဲ့ အပွနျအလှနျ စဈဆေးတဲ့ အခွအေနနေဲ့ပတျသတျလို့ ရှနေ့ဦေးကွညျဝငျး ကအခုလိုပွောပွပါတယျ။
"ဒီနေ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှုစဈဖွဈတယျပေါ့။ ဆကျသှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၆၇ရယျ၊ ပို့ကုနျသှငျးကုနျ ဥပဒရေယျ ၂ခုစလုံးကို စဈတယျ။ တရားလိုဘကျက သကျသကေ ဗိုလျကွီးအာကာမငျး လာတယျ။ အဲတယောကျထဲကို ၂မှုစလုံးစဈတာပေါ့။ သူကသကျသေ ၂ခုစလုံးပါနတောကို။ နောကျအမှုက သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ကောပေါ့ ။သဘာဝဘေး အန်တရာယျ ၂၅ အဲဒါကိုရဲတယောကျနဲ့ မွို့မဈေးက အုပျခြုပျရေးမှုး။ ကြေးရှာ၊ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှုးကိုစဈတယျ။ အဲဒါနဲ့ ဒီနတေ့နကေုနျတာ ပေါ့."
ဒီကနစေ့ဈဆေးတဲ့ အမှုတှကေတော့ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ ၊ ပို့ကုနျသှငျးကုနျ ဥပဒေ ပုဒျမ ၈ နဲ့ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇ တို့နဲ့ စှဲဆိုထားတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှု ၃ မှု နဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့ ကိုတော့ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ စှဲထားတဲ့ တဈမှု စုစုပေါငျး အမှု ၄ မှု အတှကျ ကွားနာ စဈဆေးတာဖွဈပါတယျ။
ဒီကနစေ့ဈဆေးမှုတှမှော တဖကျက တငျပွခကျြတှကေို အကောငျးဆုံးခုခံခပြေနိုငျခဲ့သလို အပွနျအလှနျ မေးခှနျးတှမေေးတာမှာလဲ အပွဈကငျးကွောငျးကို သကျသထေူနိုငျလောကျတဲ့ အထိ တငျပွနိုငျခဲ့တယျ လို့ ပို့ကုနျသှငျးကုနျ ဥပဒေ ပုဒျမ ၈ နဲ့ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇ အမှုကို စဈမေးခဲ့တဲ့ ဦးကွညျဝငျး ကပွောပါတယျ။
"ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှုကတော့ဒီနကေို့ယျစဈရတာကို ကိုယျစဈတဲ့ အခါကတြော့ ဥပဒေ အရ ငွိစှနျးမှုမရှိဘူးပေ့ါ။ ဆကျသှယျရေးပစ်စညျးတှကေ ပွညျထဲရေးဌာနသုံး တာတှဘေဲလေ။ သူ့ဆီကမိတာမဟူတျဘူးလေ။ တိုငျတဲ့ အမြိုးအစားပျေါရှငျးနတောဘဲလေ။ အဲဒါ တှကေို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆီကသိမျးတာမဟုတျဘူး။ မနကျ ၃နာရီလောကျရောကျပွီးတော့ လုံခွုံရေးအဖှဲ့ဆီက ၆လုံး နောကျကငျးဂိတျကတလုံး ကိုယျရေးအရာရှိဆောငျက တလုံး ဒါဘဲ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆီကသိမျးတာမပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ ဒီအမှုတငျမဟုတျဘူး။ ရှနေ့ပေညာ အရ သိနတောဘဲ။ ပွဈမှုကငျးမကငျးသိတယျလေ။ နောကျရဲကိုယျတိုငျကကိုယျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆီ ကသိမျးမသိမျးကိုပျေါတာဘဲ။ ထုံးစံအရဆို မူးယဈဆေးတှမေိရငျ ရှာဖှပေုံစံနဲ့သိမျးကွတယျလေ။ဒါကကနြေျာ့ အိမျထဲက၊ ကုတငျဆီကစသဖွငျ့သိမျးကွရတယျ။ ခုက သူတို့ရဲတှကေသူတို့ဘာသာအပျတာလေ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျတာမှမဟုတျတာ။"
အမှုတှကေိုရငျဆိုငျနရေတဲ့ အတိုငျပငိခံရဲ့ အမှုတှအေပျေါသဘောထားနဲ့ပတျသတျလို့ဗှီအိုအကေ အတိုငျပငျခံရှနေ့တှေကေိုမေးကွညျ့တာမှာတော့ သူ့သဘောထားနဲ့ပတျသတျလို့ ရှနေ့ဦေးကွညျဝငျးက အခုလိုပွောပါတယျ။
"သူကတော့သူ့သဘောထားကတော့ ဒီအမှုတှကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈသှား အောငျ အမှုကိုပျေါလှငျအောငျစဈပေးပါတဲ့ ပျေါလှငျအောငျစဈပေးပါတဲ့။"
ဒီကနေ့ ရုံးခြိနျးမှာ အတိုငျပငျခံက သူမမှေးနကေို့ တကူးတက ကငျြးပပေးကွတဲ့ ပွညျသူတှကေိုကြေး ဇူးတငျကွောငျးနဲ့ သူမအနနေဲ့ ပွညျသူတှကေနျြးမာဖို့နဲ့ ညီညှတျစှာနထေိုငျကွဖို့ မှာကွားတယျလို့ ပွောပါတယျ။ မှေးနေ့ ဆုတောငျးအနနေဲ့ ပွညျသူတှေ ကနျြးမာဖို့ကို ပွနျဆုတောငျးပေးခဲ့တယျလို့ ရှနေ့အေဖှဲ့ကနတေဆငျ့ မှာကွားလိုကျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒပေုဒျမ ၅၅၊ အစိုးရလြှို့ဝှကျ ခကျြပေါကျ ကွားမှုဥပဒပေုဒျမ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒပုဒျမ ၈ ၊ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇ ၊ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံဆျောမှု လုပျဆောငျမှုဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပွငျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါငျး ၇ မှုနဲ့ တရားစှဲခံထားရပါတယျ။ ရနျကုနျမှာ တရားစှဲခဲ့တဲ့ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြပေါကျ ကွားမှု ဥပဒပေုဒျမ ၃(၁) (ဂ)ကို နပွေညျတျောမှာ ရုံးပွောငျး စဈဆေးခှငျ့ရမရ ကွားနာမှုကိုလညျး နပွေညျတျောတရားလှတျတျောခြုပျမှာ လာမယျ့ သီတငျးပတျအတှငျး ဇှနျလ ၂၃ ရကျနမှေ့ာပွုလုပျဖို့ ရှိနပေါတယျ။
မနကျဖနျ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ အင်ျဂါနရေုံ့းခြိနျးမှာတော့ ဒေါကျတာမြိုးအောငျ အပါအဝငျ ၃ယောကျကို တရားလို ဦးစိုးထှနျးရှကေ စှဲထားတဲ့ အမြားပွညျသူတညျ ငွိမျမှုအေးခမျြးမှု ပကျြအောငျ လုပျဆောငျမှု၊ အမှုကို စဈဆေးမှာ ဖွဈသလို၊တရားလို ဦးထှနျးမွငျ့အောငျ ချေါ ဦးညီညီက သဘာဝဘေးအန်တရာယျ တားဆီးကာကှယျရေး ဥပဒနေဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို စှဲထားတဲ့ အမှုကိုလညျး စဈဆေးသှားဖို့ ရှိ ပါတယျ။